Animation 3D ah ee logos aad, qoraalka iyo wixii la mid ah waa mid aad loo jecel yahay ee intros iyo dhinacyo kale oo post-soo-saarka, muddo dheer tageen maalmood ah marka aad u baahan tahay tago fur gaar ah si ay u gaaraan saamaynta yihiin, waxaad ka heli kartaa wax soo saarka fiican animation 3D, fudud oo si fudud uga soo baxay sanduuqa ka dib markii saamaynta, halkan waxaan abuuri doonaa qaar ka mid ah qoraalka 3D oo nooleyn.
1. Qaab dhismeedka
Our shaqo koowaad waa in la abuuro kooban. Qoraalka 3D ama qaabab, ama haddii aad soo degida naqshadeynta dulinka shka sida logo ah, waxaa jira goobo aad u baahan tahay si ay awood ku saabsan ka kooban waayo, waxaa oo dhan si ay u shaqeeyaan.
Ama marka aad xulan Curiska New ama kan hadda jira doorataa goobaha ka kooban, waxaad u baahan tahay in tab sare oo ku biiray uga sii default Classic in Ray-ogan 3D ka abaalmarin.
Marka wareegay Ray-ogan 3D, waxaad markaas dhigay kartaa fursadaha ay u sameeyeen. Waxaan tagay tayada ee caadiga ah 3 dibadbaxaasi, sida aad ka arki karto, barnaamijka sharxayaa saamaynta heerarka tayo leh oo kala duwan si aad u shaashadda tani, balse xusuusnow in la moodo markii kordhin kartaa si weyn ugu tayada sareeya, sidaas awgeed waa a dheelli-fal ah ee waxa la isticmaalo loogu talo galay waa. Goob ugu danbeeya ayaa halkaan joogi doonaa doorasho shakhsiyeed oo ku salaysan waxa ay isku xigxigta, waxaa loo isticmaali doonaa oo mudada aad sugi karo haya'ad ah.
Iyada oo aad samaysay oo aan ku abuuri karno iyo qoraalka 3D iyo qaabab kala shaqeeyaan gudaha ka dib markii laftiisa Raadka, si aynu qaado.
2. Abuuridda 3D qoraalka noo
Tallaabada xigta waa in la abuuro 3D qoraalka noo. Waxaan abuuray 2 layers text u gaar ah labada erayada, Wonder iyo Share, sababtoo ah iyaga ka dhigaa inay si gooni gooni ah dhiirogelin habka fudud.
Marka abuuray waxaan beddelo cabbirka qoraalka si ay u sidee baan u jeclaan iyo xaqiijiyey labada layers ahaayeen in hab 3D in waqtiga - icon kasaarka ah.
Hadda oo la dhamaystiro, waxaan extrude karaa qoraalka ah ee 3D. Muddo ka kooban Ra-ogan walxaha 3D leeyihiin sifooyinkaa dheeraad ah, iyo xulashada lakabka text naga heli kartaa Options Joometri in la abuuro in saamayn 3D extruded.
Halkan waxaan kuugu dari saamayn extrusion ah in ay safka hore ka, qoto dheer oo 20 shuqullada mashruucan, laakiin kaliya heli qiimo in aad ka heli muuqaal lagaga raalli yahay. Halkan waxa kale oo aad ku dari kartaa bevels iyo wixii la mid ah, laakiin tani mid aan kaliya la isticmaalayo extrusion.
Celin isku mid ah oo ku saabsan qoraalka lakabka 2aad ina siinaysaa aad erayo la qoto dheer extrusion 20 ah.
Hadda, in laga yaabo in aan fiirin aad u xiiso badan oo kaliya haatan, laakiin waxa ay ku dhegeen leh.
3. Samaynta fiirin 3D
Ma eegi uusan si gaar ah u cajiib ah daqiiqadii, si kastaba ha ahaatee, hadda waxaan doonayaa in aan ku soo bixinaa quruxda hababkan. Our shaqo koowaad waa in lagu daro camera ah sidiisa.
Ka dibna by xaq gujinaya lakabka camera mar abuuray, la abuuro anshax Orbit ah oo kaamirada
Halkaa marka ay marayso waxaan go'aansaday in aan u janjeeri qoraalka wax yar si aad u samayso inta badan saameyn ku 3D, si fudud oo isticmaalaya dhidibka x, y oo z guddiga waqtiga, sidaas oo kalena haatan taas waxaan heysanaa.
Hadda, in weli ma eegto si wanaagsan, laakiin 3D wax ku ool ah waxaa haboon in la xasuusnaado nalalka waa wax walba. Waxaan weli nuurka haysataan wax walba garaacid si siman halkan, si aad u hesho qoraalka 3D jecel yahay waxaan rabnaa in aan ku daro light dhibic sidiisa.
Waxaan u isticmaalaa goobaha caadiga ah iyada oo aan wax laga beddelo
tani waa natiijada.
Sida aad arki karto, in aan hadda ka text 3D cajiib ah, haatan waa wakhti si ay u nooleyn.
4. Aasaaska of 3D Animation
Haatan waa inaan qaar ka mid ah raadinaya qoraal 3D weyn, waxaan rabnaa in aan hubiyo in aan awooddeenna ugu badan in loo sameeyo marka ay dhiirogelin. Waxaad, dabcan, hadda si fudud u isticmaali kartaa ka beddesho iyo booska qalabka caadiga ah ay u guuraan layers qoraalka, beddesho midab ah iyo wixii la mid ah, oo haddii aad la socota camera iyo xitaa isha iftiin aad dhab abuuri karaan qaar ka mid ah animations adag ayaa laga yaabaa. Laakiin in lagu daro fursadaha ka badan, tallaabo hore waa in la isticmaalo qalab weyn oo dhisay galay ka dib Raadka, iyo in uu yahay 'sahlo per 3D dabeecad'. Tani waxaa laga helaa hoos Animation> Text> sahlo per Character 3D waddada> menu sida aan ka arki kartaa.
Sidee baan waxan u sameeyaa layers qoraalka labada, sidaas oo kalena haatan waxaan awood u leeyihiin in ay codsadaan nooc cusub oo ka mid ah dhaqdhaqaaqa iyo Isbadal ma ahan oo keliya in erayga, laakiin jilayaasha shaqsi, oo dhan gudahood jawi 3D.
Hadda waxaan dooran kartaa dhaqdhaqaaq ah waxaan rabnaa in aan ka button waqtiga xejisto ah, ama haddii aad rabto in aad tijaabiso waxoogaa aad qasacadaha guji dar oo dhan u beddesho guryaha iyo lakabka ku jiri doona oo dhan animators ee si aad isugu daydo.
Waxa ugu horeeya ee aan sameeyo marka la 3D shaqeeya tani waxay ahayd, gaar ahaan haddii aan doonayaa inaan la tijaabiyay sida aan halkaan ku jira, waa inay u soo guuraan dulqabo markii dhammaadka kooban oo ku dhow keyframe ah ee dhammaan sifooyinka barta in. Waa maxay waxan sameeyo ayaa lagu wadaa dhibic dhamaadka in ay si sax ah meesha hadda aad tahay, si aan loo eegayn waxa lagu daray, tani waa meeshii hadalka ku dhamaan doonaa. Tani waxay noqon kartaa mid aad waxtar u hagaajin ka dib si ay u sameeyaan animation soo afjaro si habsami leh marka aad leedahay dhibic dhamaadka go'an in ay ka shaqeeyaan in.
Ka dibna waxaan ku soo noqnoqda talaabooyin la mid ah erayga kale.
A ayaa sidoo kale intaa ku daray in sifo midab ah, waayo, wejigiisa hore oo kaliya, ee eray kasta via Add> Hantida> Front on sifo animator in guddi waqtiga ay. Tani waa sababta oo ah waxaan u maleeyay in la kala guurka midabka fiican uugu dari karaan saamaynta, Waxaan dhigay midabka dhamaadka ah ee lakabka ugu yaab sida cad, iyo lakabka share sida buluug ah. Waxaan sidoo kale baadi goob baaxad iftiin yar oo kaliya in la sameeyo saamaynta yar oo dheeraad ah lagu qeexay. Sida aad horumar iyada oo isku dayaya baxay qalabka marnaba ka baqin ilaa wax ka bedeshid si aad u hesho muuqaal saxa ah aad rabto. Waxaad mar walba xaq u riixi kartaa oo Dib u celi lakabka kasta haddii aadan Ma jecli waxa aad aakhirka la noqotaa bilowgii. Natiijadan ayaa waxa waxaas oo dhan waa barta dhamaadka isku xigxiga ee halkan ka.
Hadda waxaan u baahan nahay in aad ku darto ah ee dhaqdhaqaaqa.
5. dhiirogelin Text ee 3D
Xigxiga ugu horeeya ee aan rabay in aan sameeyo waxa la siiyaa labada erayada shaashadda. Waxaan sidoo kale doonayaa inuu ku dhajisan midabada si ay ka dib u beddesho karo. Waxaan doortay animation fudud halkan, la lakabka yaabka dhacaan shaashadda iyo lakabka share baxna u galay. Tani waxaa loo sameeyaa ka goob animation booska si fudud ku beddelaan y qiimaha dhidibka. Sidaas la dulqabo markii bilowgii waqtiga aan booska yaabka qarka u saaran inuu kaliya ka baxsan shaashadda, taas oo soo baxday in -1000, ka dibna u dhigay qiimaha saamiga ee 10,000 si ay u kaca galay shaashadda. Waxaan sidoo kale la bedelay labada midab yeelaa in ay lid ku tahay qiimaha dhamaadka. Ma aragtaa buluug, Share cad.
Dejinta keyframe ugu horeysay ereyada ee jagooyinka, kuwaas oo, ka dibna waxaan ku dhaqaaqnay 2 ilbiriqsi, dhigay keyframe ah lakabka yaab dib ugu booska bilowga ay ka, si animation tusi doonaa erayga tagtey galay shaashadda ka badan 2 ilbiriqsi. Markaas aniga ayaa keyframe ah lakabka share ee 3 ilbidhiqsi, sidaas oo kale qof in kaca oo la soo gabagabeeyey socdaalkii 1 labaad ka dib markii erayga hore, ilaa si loo soo afjaro sida aan halkan ku sugan yihiin.
Qaybta xigta ee animation waa inay isku shaandheyn erayada taxey z ah, sidaa darteed waxaan si fudud u dhigay keyframe la qiimaha wareeg ah 1 a, ka dibna kale marka waxaan doonayay animation ah si loo soo afjaro labada lakab.
Tallaabada xigta waxaan doonayaa inaan sameeyo waa in aad codsato wareeg ah in qof kasta oo ka bacdi, halkii eray oo dhan isku mar, tan la gaadho iyadoo goob jarayaa xulista kala duwan.
Qiimaha saxda ah halkan ku xiran yahay sida weyn ereygaagu waa iyo wixii la mid ah, tijaabo ilaa aad ka hesho saamayn aad rabto, laakiin waxa ay qabato waa in ay codsadaan dib u dhac ah oo ay u saamayn ee qof kasta si aad u dhacdhacaan kartaa sida ay u guuraan.
Markaas ayaan soo jeediyey warejin soo socda, dhidibka x u share iyo y dhidibka yaab, la daboolo meel, oo soo noqnoqda keyframes in uu abaabulo aan animation.
Sida aynu ka arki kartaa, abuurista iyo dhaceen text 3D waa mabda 'sida ugu fudud ee animation kasta oo kale, ee la dhisay ee qalabka la abuuro in qoraalka 3D iyo iftiiminta dhigin mid aad u sahlan. Adayga ma soo markii aad qorshaynaysid isku xigxigta, animation laftiisa, haddii aad leedahay wax badan oo dhaqaaqo shay aragti dheeraad ah waxay sababi kartaa jahwareer sida meesha wax walba waa haddii aadan si taxaddar leh. Qorshee soo, iyo shaqeeyaan si qorshaysan ee wakhti kasta si ay u dejiyaan qaybaha kasta meesha aad rabto in ay noqon iyo meel qalad ah kuma waxaad hor mari doontaa.
> Resource > Video > Sida loo sameeyo 3D Animation in dib markii Raadka